Mayelana nathi - Shijiazhuang Osprey Amathuluzi Co., Ltd
Laser ashiselwe Diamond Saw Blades
Diamond Ukugaya & wokucwebezelisa Amathuluzi
Diamond Cup Amasondo (Brazed)
Diamond Cup Amasondo (Sintered)
PCD Cup Amasondo / PCD
Diamond Plate Ukugaya (Brazed)
Diamond Ukugaya Shoes (Brazed)
Shijiazhuang Osprey Amathuluzi Co., Ltd itholakala imishini yokukhiqiza base e Shijiazhuang. Kusukela yasungulwa ngo-2003, Osprey Amathuluzi iye nikela uqobo ekuthuthukiseni kanye womshini amathuluzi idayimane. Ububanzi umkhiqizo ihlanganisa idayimane isiyingi babona izindwani, amasondo ukugaya, izicathulo ukugaya, pads wokucwebezelisa, core sokuprakthiza ibhithi njll Osprey Amathuluzi inenethiwekhi yokuthengisa esehlanganise izifundazwe 30 eChina, kanti emazweni angaphandle ukuba eNyakatho Melika, eYurophu, e-Oceania kanye nezinye izifunda. Ngaphandle brand ayo, Osprey Amathuluzi ibambisane amakhasimende amaningi e-OEM noma OEM ibhizinisi. Ngemva kweminyaka yentuthuko okusheshayo, Osprey Amathuluzi manje ungomunye ekuholeni abakhiqizi Chinese amathuluzi idayimane, futhi unqobile abe nobufakazi obuhle imikhiqizo high kanye esiqinile izinga control.
Osprey Amathuluzi ihlanganisa indawo 20,000 square metres, kanye R professional & D, QC, Production, futhi Sales ithimba njll, abasebenzi Imininingwane phezu 150. Le workshop has okunokwethenjelwa ukukhiqizwa nokuhlolwa izindawo othomathikhi noma semiautomatic, kuhlanganise sintering umugqa, brazing umugqa, laser Welding umugqa , analyzer ubulukhuni, ukuminyana analyzer, ibhalansi umhloli, ukuhlolwa ensimini njll
Unyaka ngamunye Osprey Amathuluzi itshala imali ngo-10% wemali engenayo yonyaka R & D. Umnyango we-R & D Ithimba ine nakho kuba khona isilinganiso sabangu kuka-10 eminyakeni, futhi bekwazi ukusukumela phezulu izicelo ngendlela oyifisayo. Umnyango we-R & D onjiniyela bayawazi izimo isicelo ezihlukahlukene amathuluzi idayimane, okuyinto ziwenza akwazi ukuthola ukuthi ukunikeza amakhasimende nge professional isiqondiso lobuchwepheshe, design izeluleko ukuqeqeshwa msebenzi.
Le nkampani ine omuhle kakhulu uhlelo lokulawula izinga, kuhlanganise IQC, IPQC, FQC, ngemva-ukudayiswa service njll, ukuqinisekisa ukuthi zonke amakhasimende ukuthola imikhiqizo izinga okusezingeni kuphela. Nge esiqinile idokhumenti control, ubumfihlo kwemibhalo lobuchwepheshe kanye nolwazi ikhasimende aqinisekisiwe.
Osprey Amathuluzi, umphakeli wakho onokwethenjelwa amathuluzi idayimane. Siyakwamukela embonini yethu, futhi ngabomvu ukusebenzisana nawe!